onsen | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > onsen
जापानमा ओन्सेन (तातो पानीको मूलमा) नुहाउनको अनुभब यो देश घुम्न आउने सबैले लिनु पर्ने एक बिशेष चिज हो। जापानको निकै प्रख्यात ओन्सेन होङ्के बाङ्क्युले जापनी स्थानिय र बिदेशी पर्यटक ध्यान निकै तान्ने गरेको छ। यसको कार यो ओन्सेनको सन् १६६६ देखिको पुरानो ईतिहास। होङ्के बाङ्क्युले त्यहाँ आउने गेस्टलाई रिल्याक्स गर्नको लागि रुम पनि दिन्छ। साह…
के तपाईलाई जापानमा PR लिएर बस्न मन छ? जापानी नागरिक बन्न ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु ? 2019-04-16
मियाजिमा टापुमा यी कुरा गरेर जापानको गर्मि छल्नुहोस् . 2019-07-06
यो जाडो मौसममा तातो बनाउने जापानका केहि शिर्ष साके(रक्सि)का ब्राण्ड 2020-02-19
विदेशी पर्यटक दुर्व्यवहार गर्दैछन्, र जापान खुशी छैन: के हुँदैछ?
नया बिदेशी कामदार 2019 सम्बन्धि थप सरकारी माप र उपाय
के मानिसहरु साचिकै घोडाबाट बनेको तेल प्रयोग गर्दछन?
जापानका केहि अजब गजबका सब्जीहरु